Malunga Nathi- iHangzhou Spring Biotechnology Manufacturer & Supplier
Ishishini le-Hi tech eligxile kwisondlo soMntu kunye nesondlo sezilwanyana-igxile ngakumbi kwi-carotenoids.
Ukuba yinkokeli yentengiso ekuboneleleni ngemibala ye-carotenoid enesondlo kwizilwanyana nakubantu, ethembekileyo kwaye enoxanduva!
Ukwenza ixabiso;Ukwenza imibala;Ukudala ukungavisisani!
Phucula umgangatho wobomi.
Ukuba nemibala kunye nesondlo;Ukukhula ngokusempilweni nangolonwabo.
Khulisa uthungelwano oluphumeleleyo lwabathengi kunye ne-Springbio, kunye senza ixabiso elifanayo, elihlala lihleli.
Yandisa imbuyekezo yexesha elide kubanini-zabelo ngelixa ukhumbula uxanduva lwethu lulonke.
Ukwenza ixabiso;Ukwenza uMbala;Ukwenza Ukungavisisani!
—— Izongezo zokutya kunye nenkampani yokuthengisa izongezo zokutya
I-Hangzhou Spring Biotechnology Co., Ltd.
I-CEO: UGqr. UMnu Xu Jianmeng
UMlawuli weNtengiso: Mr.Justin Email:sales@cantaxantina.com
Isiseko seMveliso esiThathu:
2. I-Zhejiang Medicine (Izongezo zokutya kunye nezongezo zokutya)
3. Ningbo Spring Bio.Co., Ltd. (Izithako zendalo)
Ngabasebenzi abangaphezu kwama-300, bagubungela indawo eyi-25000 square metres iyonke, amasebe ama-6 kunye namagumbi okusebenzela ali-10 aphantsi komzi-mveliso weFermentation and synthesis.
I-Hangzhou Spring Biotechnology Co., Ltd.lishishini elitsha lobuchwephesha obuphezulu obuneshishini elipheleleyo le-ZMC Group (IQELA LEZHEJIANG MEDICINE HOLDING GROUP).Ukulungiselela isicwangciso sophuhliso kwisondlo sezilwanyana kunye neshishini lezondlo zabantu, i-Spring Biotech ibhalise inkunzi yesigidi esinye se-RMB kwaye inesiseko semveliso ezibini, amasebe amabini aphethwe ngokupheleleyo phesheya kolwandle.
Njengeshishini elijolise kumazwe angaphandle, iSpring Biotech izinikele ekuphuhliseni nasekuveliseni iivithamini ezinyibilikayo ngamafutha (Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D), quasi-vitamins (Vitamin H, D-Biotin), imibala yendalo (Marigold Extract- Xanthophylls & Paprika Extract-Capsanthin), izicatshulwa zesondlo njengezongezo zokutya kunye nezongezo zokutya.Ingakumbi kwiimveliso zecarotenoid ((Beta-Carotene, Canthaxanthin, Astaxanthin) yeehagu, iinkukhu kunye nezilwanyana zasemanzini ezifumana iimarike ezinkulu phesheya kolwandle.
Ngokusekwe kumava okusebenza anempumelelo eQela le-ZMC, iSpring Biotech yaphonononga indlela enomoya omtsha.Siya kwamkela ngokufudumeleyo abahlobo abavela kwiindawo zokutya kunye nokutya ekhaya kunye nangaphakathi ukuze basebenzisane kunye nokudala umsebenzi omangalisayo kunye nokwenza igalelo kuphuhliso loluntu.
ICurcumin Astaxanthin Powder Astaxanthin Beadlet Amacwecwe eCurcumin Piperine ICurcumin yeTurmeric ICurcumin Piperine Capsules